နှေးကွေးလာတဲ့ Smartphone ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ? - ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ)
Home > နည်းလမ်းများ > နှေးကွေးလာတဲ့ Smartphone ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
နှေးကွေးလာတဲ့ Smartphone ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ?
ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) 4:49 AM Android Tutorial, နည်းလမ်းများ
[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် စမတ်ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်ကစလို့ သုံးတာကြာလာရင် ပိုပိုနှေးလာတာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဖုန်းဆိုတာလည်း အမြဲတမ်းကလိခံနေရတာဆိုတော့ Application တွေသွင်းမယ်၊ သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်တွေ Download ဆွဲမယ်၊ Facebook နဲ့ YouTube ကြည့်ကြမယ်၊ ပြီးရင် ဂိမ်းကစားဦးမယ်စသဖြင့် ခိုင်းနေတာဆိုတော့ သူလည်းကြာလာရင် ငြီးငွေ့ပြီး အလုပ်မလုပ်ချင်တော့ဘူးထင်ပါတယ်။ တကယ်က မလိုအပ်တဲ့ ဖိုင်များလာတာ၊ ဖုန်းကို ပုံမှန် Maintenance မလုပ်တာ စသဖြင့် ပိုလေးလာတတ်လို့ ပြင်ဆင်နိုင်မယ့် အချက်တွေ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Bloatware လို အသုံးနည်း၊ ကြော်ငြာ App ကို Disable (သို့) Uninstall လုပ်ပစ်ပါ
စမတ်ဖုန်း UI မှာ တစ်ပါတည်းပါဝင်ပြီးသား Launcher တွေက သူ့ဟာနဲ့သူ ကောင်းမွန်တယ်ဆိုပေမယ့်လို့ တချို့စမတ်ဖုန်းတွေ (Huawei ၊ Xiaomi ၊ OPPO နဲ့ Vivo) သုံးထားတဲ့ Launcher တွေပိုလေးပါတယ်။ မကောင်းဘူးမပြောထားပေမယ့် Launcher Skin ကိုလည်း လှလှပပနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Nova Launcher ဒါမှမဟုတ် Action Launcher စသဖြင့် ပြောင်းသုံးထားလိုက်ပါ။ ဒီကောင်တွေက ကြိုက်သလို Customization လုပ်နိုင်သလို လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ User Interface လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။
[Unicode]ဖတျရနျ စမတျဖုနျးဝယျပွီးသှားတဲ့ အခြိနျကစလို့ သုံးတာကွာလာရငျ ပိုပိုနှေးလာတာကို သတိပွုမိကွမှာပါ။ ဟုတျပါတယျ ဖုနျးဆိုတာလညျး အမွဲတမျးကလိခံနရေတာဆိုတော့ Application တှသှေငျးမယျ၊ သီခငျြး၊ ရုပျရှငျတှေ Download ဆှဲမယျ၊ Facebook နဲ့ YouTube ကွညျ့ကွမယျ၊ ပွီးရငျ ဂိမျးကစားဦးမယျစသဖွငျ့ ခိုငျးနတောဆိုတော့ သူလညျးကွာလာရငျ ငွီးငှပွေီ့း အလုပျမလုပျခငျြတော့ဘူးထငျပါတယျ။ တကယျက မလိုအပျတဲ့ ဖိုငျမြားလာတာ၊ ဖုနျးကို ပုံမှနျ Maintenance မလုပျတာ စသဖွငျ့ ပိုလေးလာတတျလို့ ပွငျဆငျနိုငျမယျ့ အခကျြတှေ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
Bloatware လို အသုံးနညျး၊ ကွျောငွာ App ကို Disable (သို့) Uninstall လုပျပဈပါ
စမတျဖုနျး UI မှာ တဈပါတညျးပါဝငျပွီးသား Launcher တှကေ သူ့ဟာနဲ့သူ ကောငျးမှနျတယျဆိုပမေယျ့လို့ တခြို့စမတျဖုနျးတှေ (Huawei ၊ Xiaomi ၊ OPPO နဲ့ Vivo) သုံးထားတဲ့ Launcher တှပေိုလေးပါတယျ။ မကောငျးဘူးမပွောထားပမေယျ့ Launcher Skin ကိုလညျး လှလှပပနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး သုံးခငျြတယျဆိုရငျတော့ Nova Launcher ဒါမှမဟုတျ Action Launcher စသဖွငျ့ ပွောငျးသုံးထားလိုကျပါ။ ဒီကောငျတှကေ ကွိုကျသလို Customization လုပျနိုငျသလို လှယျကူရိုးရှငျးတဲ့ User Interface လညျးပါဝငျပါသေးတယျ။
နှေးကွေးလာတဲ့ Smartphone ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်သွားအောင် ဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ? Reviewed by ညီလတ်ထွန်း(နည်းပညာ) on 4:49 AM Rating:5[Zawgyi] ဖြင့်ဖတ်ရန် စမတ်ဖုန်းဝယ်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်ကစလို့ သုံးတာကြာလာရင် ပိုပိုနှေးလာတာကို သတိပြုမိကြမှာပါ။ ဟုတ်ပါတယ် ဖုန်းဆိုတာလည်း အမြ...